ဂရန်း Teton အမျိုးသားဥယျာဉ် DOWNLOAD - အပြည့်အဝ pack ကို FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 420 ကို MB
downloads ရယူရန္ 17 024
The Grand Teton အမျိုးသားဥယျာဉ်, ရန်း Teton အမျိုးသားဥယျာဉ်သို့မဟုတ် English ထဲတွင် Wyoming, အမေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်၏အနောက်မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသောတစ်ဦးအမေရိကန်အမျိုးသားပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။
1254 km2, ပန်းခြံတစ်ခုဧရိယာဖုံးအုပ် 4197 မီတာအမြင့်မှာ culminates သောက Grand Teton ကကြီးစိုး၎င်း၏တောင်ကြီးတောင်ရှုခင်းကျော်ကြားသည်။ ၎င်း၏ကျောက်, အဟောင်းတွေထက်နှစ်ဘီလီယံအနှစ်, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာရှေးအကျဆုံးအကြားရှိပါတယ်။
တင့်တယ် HD ကိုဓာတ်ပုံ-ကိုမှန်ကန် VFR များအတွက်စံပြအရည်အသွေးမြင့်နှင့်ဖွဲ့ရှုခင်း။
သတိပြုရန်ကြီးမားတဲ့ဖိုင် 418 မိုထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).
အရေးကြီးဘယ်လိုရှုခင်းကိုအသုံးပွုဖို့? သငျသညျကနေသင်တို့ပြေးစတင်နိုင်ပါသည် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် Hole လေဆိပ် (type ကို KJAC)